Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » CMA CGM Group zụtara Airbus A350F Freighters anọ
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Safety • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
CMA CGM Group zụtara Airbus A350F Freighters anọ.
A350F dabere na onye ndu ogologo ogologo oge kachasị n'ụwa, A350. Ụgbọ elu ahụ nwere nnukwu ọnụ ụzọ ụgbọ mmiri na ogologo fuselage ahaziri maka ọrụ ibu.
Otu CMA CGM na Airbus abanyela aka n'akwụkwọ nkwekọrịta nkwekọrịta (MoU) maka ịzụrụ ụgbọ elu anọ nke A350F. Usoro a, nke a ga-emecha n'izu ndị na-abịa, ga-ebuli ụgbọ elu CMA CGM nke Airbus na ụgbọ elu itoolu, gụnyere A330-200F ise.
Ụgbọ elu a ga-arụ ọrụ site na CMA CGM AIR CARGO, ọrụ ụgbọ elu ewepụtara na nso nso a Otu CMA CGM.
"Anyị nwere obi ụtọ ịnabata CMA CGM AIR CARGO na otu ndị na-arụ ọrụ maka A350F na anyị nwekwara obi ụtọ ịkwado mmepe atụmatụ ụlọ ọrụ ahụ n'ọdịnihu," Christian Scherer, Onye isi azụmaahịa na Airbus kwuru. Airbus Mba ụwa. "A350F ga-adaba n'enweghị nsogbu n'ime ụgbọ mmiri nke ndị na-ebu ya Airbus ndị na-ebu ibu. Ekele maka ikuku ikuku ya na igwe teknụzụ kachasị ọhụrụ, ọ ga-eweta arụmọrụ na-enweghị atụ n'ihe gbasara ọkụ ọkụ, akụ na ụba na ikuku CO₂, na-enye ike uto na-adigide ogologo oge nke otu a." Scherer na-agbakwụnye, sị: “N'inwe nkwado mbụ site n'ụlọ ọrụ ike ibu nke mba ụwa dị ka nke Otu CMA CGM na-atọ ụtọ nke ukwuu.”
A350F dabere na onye ndu ogologo ogologo oge kachasị n'ụwa, A350. Ụgbọ elu ahụ nwere nnukwu ọnụ ụzọ ụgbọ mmiri na ogologo fuselage ahaziri maka ọrụ ibu. Ihe karịrị 70% nke ikuku ikuku bụ ihe ndị dị elu na-eme ka ọ dị arọ 30t dị mfe, na-ewepụta mmanụ opekata mpe 20% na-ere ọkụ karịa onye asọmpi ya ugbu a. Site n'ikike ịkwụ ụgwọ 109t (+ 3t payload / 11% karịa olu karịa asọmpi ya), A350F na-eje ozi n'ahịa ibu niile (Express, ibu izugbe, ibu pụrụ iche…) ma nọ na ngalaba ibu ibu naanị ụgbọ elu ọhụrụ na-ebu ibu dị njikere maka ya. ụkpụrụ ikuku ikuku 2027 ICAO CO₂ emelitere.